Madaxweyne Farmaajo oo war ka soo saaray weerarkii lagu qaaday hotelka Naasa hablood-2.
0 Saturday October 28, 2017 - 19:05:48
Madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa ka tacsiyeeynaaya muwaadiniintii ku geeriyooday weerarkii lala beegsaday Hoteel Naaso hablood-2 ee magaalada Muqdisho.
Meydka Wasiir ka tirsan Maamulka K/Galbeed oo laga soo saaray hotelka Naasa Hablood-2.
0 Saturday October 28, 2017 - 18:40:46
Waxaa weli iska soo daba dhacaya wararka la xiriira weerarkii lagu qaaday hotelka Naasa hablood-2, waxaana goor dhow la xaqiiiyey in masuuliyiinta lagu dilay gudaha hotelka uu jiro Wasiirkii Arrimaha Gudaha Maamulka Koofur Galbeed Madoobe Nuunow Maxamed.
Masuuliyiintii Galmudug ee ka soo horjeeday madaxweyne Xaaf oo Muqdisho soo gaaray (Da.
0 Saturday October 28, 2017 - 18:20:38
Waxaa galabta magaalada Mu qdisho soo gaaray Madaxweyne ku-xigeenka iyo Gudoomiyaha Baarlamanka Galmudug Maxamed Xaashi Carabey iyo Cali Gacal Casir.
Tirada dhimashada qaraxii Naasa hablood-2 oo korortay & Masuuliyiin la soo badbaadiyey.
0 Saturday October 28, 2017 - 18:04:49
Waxaa sii kordhaya khasaaraha nafeed ee ka dhashay qaraxii lagu weeraray ka dhacay Hotelka hablood-2 ee magaalada Muqdisho oo caawa ay ka dhex degaalamayaan dabley qaraxa ka dib gudaha u gashay.
(Sawirro cusub) Dabley ka dhex dagaalameysa hotelka Naasa Hablood-2 iyo Wararkii ugu dambeeyey.
0 Saturday October 28, 2017 - 18:00:11
Rasaas la isweydaarsanayo iyo qaraxyo loo adeegsanayo bambooyinka gacanta laga tuuro ayaa laga maqlayaa gudaha iyo agagaarka hotelka kuwaasoo ay soo tuurayaan dableyda ka tirsan Al-shabaab oo tiradooda rasmiga ah aan la ogeyn balse lagu qiyaasayo 3-4 nin iney yihiin.
Wasiir hore oo ka mid noqday dadka ku dhintay weerarka lagu qaaday hotelka Naasa hablood-2.
0 Saturday October 28, 2017 - 17:50:51
Waxaa soo baxaya faahfaahino ku saabsan khasaaraha ka dhashay weerarkii galabta qorax dhacii lagu qaaday hotelka Naasa hablood-2 ee magaalada Muqdisho, iyadoo dabley ka tirsan Al-shabaab ay gudaha ugu jiraan illaa caawa kana dhex dagaalamayaan.
Taliye ka tirsan kuwa Booliska degmooyinka G/Banaadir oo ku dhintay weerarkii Naasa hablood.
0 Saturday October 28, 2017 - 17:47:52
Warar soo baxaya ayaa sheegaya in sarkaal ka tirsan ciidanka Booliska gobolka Banaadir uu ka mid noqday dadkii ku naf waayey qaraxyadii galabta lagu weeraray hotelka Naasa hablood-2 ee magaalada Muqdisho.
Daawo Sawirada "Qarax labaad oo dhacay & rag hubeysan oo gudaha u galay hotelka Naasa hablood-2.
0 Saturday October 28, 2017 - 17:35:41
Qarax labaad ayaa goor dhow ka dhacay agagaarka kaalin shidaal oo ku yaalla taalada daljirka dahsoon ee magaalada Muqdisho.
0 Thursday October 26, 2017 - 13:16:25
Golaha Wasiirada ee Xukuumada Federaalka Soomaaliya ayaa maanta yeeshay kulankoodii caadiga ahaa oo uu shir-guddoominayey Ku-Simaha Ra'iisal Wasaaraha Xukuumada Mudane Mahdi Mohamed Guled (Khadar). Arrimaha diirada lagu saaray shirkan waxaa ka mid ahaa Masiibadii Qaran ee 14kii Oktoober 2017, Geeridii…
Wararkii ugu dambeeyey shirka madaxda dowlad goboleedyada oo maalintii labaad galay
0 Monday October 09, 2017 - 13:59:44
Magaalada Kismaayo ee Xarunta Maamulka Jubbaland waxaa maalintii labaad ka socda shirka Madaxda maamul gobaleedyada oo xalay halkaas ka furmay.
C/llaahi Sheekh Cumar oo lagu dhaawacay weerar maanta lagula beegsaday Muqdisho
0 Monday October 09, 2017 - 12:02:36
Qeybo ka mid ah degmada Dharkeynley ee Gobolka Banaadir ayaa waxaa lagu weeraray Agaasimaha Waaxda Shaqada iyo Shaqaalaha Wasaarada Gaadiidka ee xukuumada Somalia C/llaahi Sheekh Cumar.
Madaxweyne Ku-xigeenka Puntland oo ka hadlay khilaaf la sheegay inuu kala dhexeeyo C/wali Gaas
0 Monday October 09, 2017 - 11:05:37
Madaxweyne Ku-xigeenka Maamulka Puntland Eng C/llaahi Cumar Camey ayaa beeniyey in wax khilaaf ah ka dhex jiro madaxda Puntland gaar ahaan isaga iyo madaxweyne Gaas.
0 Monday October 09, 2017 - 10:11:09
Madaxweynaha Kuuriyada Waqooyi, Kim Jong-un,ayaa walaashii u dalacsiiyay jago sare oo ay ka qabanayso xisbiga ka taliya dalkaasi.
Axmed Madoobe oo fariin u diray Dowladda Somaliya
0 Monday October 09, 2017 - 09:14:44
Madaxweynaha Maamulka Jubbaland Axmed Maxamed Islaam (Axmed Madoobe) ayaa fariin u diray Dowladda Federalka Somaliya, iyadoo uu xun yahay xiriirka ka dhaxeeya Dowladda Somaliya Iyo Maamul Goboledyada dalka ka jira.
(Daawo Sawirro) Maxaa ka soo baxay kulan dhexmaray RW Kheyre & gudoomiye Jawaari?
0 Sunday October 08, 2017 - 13:55:00
Guddoomiyaha Baarlamanka Somalia Maxamed Shiikh Cismaan (Jawaari) ayaa maanta Xafiiskiisa ku booqday RW Xasan Cali Khayre iyagoo ka wada hadlay xaalada guud ee dalka iyo sidii loo xoojin lahaa iskaashiga Xukuumadda iyo Baarlamaanka.
C/wali Gaas oo lagu soo dhoweeyey Kismaayo & iska horimaad ka dhacay magaaladaas (Daawo Sawirro)
0 Sunday October 08, 2017 - 12:01:07
Madaxweynaha dowlad goboleedka Puntland C/wali Maxamed Cali Gaas iyo wafdi uu horkacayo ayaa gaaray galabta magaalada Kismaayo.
Gaari ay la socdeen xildhibaano oo lagu weeraray bartamaha Magaalada Jowhar
0 Sunday October 08, 2017 - 11:05:14
Gaari ay la socdeen labo xildhibaan oo ka tirsan Baarlamanka dowlad goboleedka Hirshabelle ayaa galabta lagu weeraray bartamaha magaalada Jowhar ee gobolka Sh/dhexe.
Daawo Sawirada: Madaxda Galmudug iyo Hirshabelle oo si weyn loogu soo dhaweeyay Kismaayo
0 Sunday October 08, 2017 - 10:11:35
Waxaa maanta magaalada Kismaayo ee xarunta KMG ee maamulka Jubbaland si diiran loogu soo dhaweeyay Madaxweynayaasha Maamulada Galmudug iyo Hirshabelle .
(Daawo Sawirro) Madaxweyne Farmaajo & wafdigiisa oo si diiran loogu soo dhoweeyey Khartuum
0 Wednesday October 04, 2017 - 13:16:38
Madaxweynaha Soomaaliya Maxamed C/llaahi Farmaajo iyo wefdigii uu hoggaaminayey ayaa ka degay garoonka dayuuradaha magaalada Khartuum ee dalka Suudaan.
RW Kheyre oo kormeerey mid ka mid ah Wasaaradaha muhiimka ah ee dowlada (Daawo Sawirro)
0 Wednesday October 04, 2017 - 12:25:26
Ra'isul wasaaraha Xukuumadda Soomaaliya Xasan Cali Kheyre, ayaa maanta Kormeeray Xarunta Wasaaradda Maaliyadda Soomaaliya.
« Prev12345678 ... 550Next »